Yini i-Social Media? Kungani Izinkampani Kufanele Zinakekele?
Kukhona izingxoxo eziningi mayelana nomthelela noma ukungabi namandla komthelela wezokuxhumana kumabhizinisi we-B2C neB2B. Okuningi kwakho kubukelwa phansi ngenxa yobunzima besibaluli nge analytics, kepha akungabazeki ukuthi abantu basebenzisa ukuxhumana nomphakathi ukucwaninga nokuthola izinsizakalo nezixazululo. Awungikholwa? Vakashela i-Facebook njengamanje bese upheqa abantu abacela izincomo zomphakathi. Ngibabona cishe nsuku zonke. Eqinisweni, Abathengi banamathuba angama-71% okuthenga ngokuya ngokudluliselwa kwezokuxhumana.
Ngokuvuthwa kwemithombo yezokuxhumana kwezebhizinisi kule minyaka embalwa edlule, izinhlangano eziningi ze-B2B ziyalibona inani langempela elinganikeza lona. Noma ngabe usebenzisa imithombo yezokuxhumana ukusiza ukuthengisa imikhiqizo ngqo noma ukuyisebenzisa njengengxenye eyodwa yenqubo yakho yokuhola, ukuthatha indlela ehleliwe ehlanganisa ngokuphelele imithombo yezokuxhumana kucebo lakho lokumaketha jikelele kuzokunikeza ithuba elihle lokukhiqiza ibhizinisi elisha. UStephen Tamlin, Egatshela IYurophu
Yiziphi Izindlela Ezi-4 Zokuxhumana Komphakathi Okufanele Zenziwe Ibhizinisi Lakho?
Ukulalela - Ukuqapha imithombo yezokuxhumana ukuphendula amathemba namakhasimende online kuyindlela enhle yokwakha ubudlelwano obethembekile nabo. Akufanele kukhawulelwe kubo abakhuluma ngqo nawe, noma. Kufanele ulalele noma yikuphi ukushiwo kwamagama wabasebenzi bakho, imikhiqizo yakho, namagama wakho womkhiqizo. Lokhu kuzokuvumela ukuthi uphendule imibuzo ehlobene nokuthengisa, uvikele isithunzi sakho esiku-inthanethi, futhi ufake ukuzethemba ngamathemba akho namakhasimende ukuthi uwuhlobo lwenkampani ebakhathalelayo nabayilalelayo. Ama-36% wabakhangisi bathole amakhasimende ku- # Twitter
Learning - 52% wabaninimabhizinisi bathole amakhasimende abo ku #Facebook kuthi u-43% wabaninimabhizinisi bathole amakhasimende abo ku- # LinkedIn. Ngokujoyina leyo miphakathi, ungalalela abaholi bemboni, abazoba ngamakhasimende akho, namakhasimende akho akhulume ngokuthi yiziphi izingqinamba ezisemqoka embonini yakho. Lokhu kuzosiza inkampani yakho ekwakheni amasu wesikhathi eside okuncintisana kulezo zimboni.
Ukuhlanganyela - Uma ukhuluma kuphela lapho kukhulunywa nawe, noma lapho kunethuba lokuthengisa - uphuthelwa ekunikezeni imithombo yezokuxhumana amazwibela okuthi uluhlobo luni lwenkampani. Ukukala okuqukethwe nokwabelana ngendatshana oyithandayo kumathemba akho namakhasimende kuzosiza ekwakheni ukwethembana negunya nabo. Ukusiza amakhasimende akho ukuthi aphumelele kuzoqinisekisa impumelelo yakho, hhayi eyabo kuphela!
Kwenyusa lizinga - Ukukhulisa ukufinyelela kwakho, inethiwekhi yakho, nokuqhakambisa imikhiqizo nezinsizakalo zakho kufanele njengengxenye yecebo lezokuxhumana elilinganiselayo. Awufuni njalo ukuzikhuthaza, kepha futhi akufanele futhi ususe lawo mathuba online. Ngaphezu kuka-40% wabathengisi bavale amadili amabili kuya kwamahlanu ngenxa yeSocial Media
Tags: Izibalo zebhizinisi lezokuxhumana ze-2015ezokuxhumana zebhizinisiukuthenga izinqumoi-google plus yebhizinisii-google + ngebhizinisiindlela imithombo yezokuxhumana engasiza ngayo ibhizinisi lakhoimithombo yezokuxhumana isiza kanjani ibhizinisii-linkedin yebhizinisiukuthengisa kuyavalwaabantu abathengisayoizinkundla zokuxhumana zebhizinisiithonya ezokuxhumukuthengisa komphakathiukuthengisa komphakathii-twitter yebhizinisi
Dec 1, 2015 ku-12: 09 AM
I-athikili emangalisayo uDouglas! Lezi zeluleko ozinikezile kufanele zisetshenziswe lapho ukhangisa ibhizinisi lakho online. Ukuthumela akwanele. Ukulalela izethameli zakho nokuzibandakanya nazo kubalulekile ukuze ukwazi ukwazi izintshisekelo zazo. Uma uyazi intshisekelo yabo, uzokwazi ukukhomba amakhasimende akho aqondisiwe. Abathengisi abaningi banamabhizinisi aphumelelayo ngenxa yamakhasimende abawatholile ngezinkundla zokuxhumana. Ngiyabonga ngalokhu okuthunyelwe okunolwazi kakhulu!
Dec 17, 2015 ku-1: 37 AM
Impela uzokhipha lezi zinto. Ngiqonde ukuthi bengilokhu ngisebenzisa imithombo yezokuxhumana njengengxenye yomkhankaso wami wokumaketha nangamasu afanele ngawo, kuze kube manje, ibilokhu yenzela ibhizinisi okuhle. Kepha angizikhawuleli ngakho lokhu okuthunyelwe kwakho kungangisiza kakhulu ukwenza okuningi kulolu hlobo lwecebo.